Akụkọ - Usoro njirimara na mpaghara ntinye nke eriri carbon
Carbon eriri tube, makwaara dị ka carbon tube, bụ a tubular ngwaahịa mere nke carbon eriri na resin. Productionzọ mmepụta a na-ejikarị eme ihe bụ carbon fiber prepreg Rolling, carbon fiber filament pultrusion, na winding. Na usoro mmepụta, ụdị dị iche iche na nha nke eriri eriri carbon nwere ike ịmepụta dị ka nhazi nke ebu ahụ. E nwere ike ịchọ mma elu nke eriri carbon carbon mma n'oge usoro mmepụta. Ka ọ dị ugbu a, elu nke eriri carbon carbon bụ 3k matte larịị nke a na-ahụ anya, nke na-acha uhie uhie, nke na-egbuke egbuke, nke na-egbuke egbuke na ụdị ndị ọzọ.
Carbon fiber tube nwere uru nke ike dị elu, nkwụsị abrasion, acid na alkali resistance, na ịdị arọ. Tụkwasị na nke ahụ, ngwaahịa ahụ nwere ọtụtụ ihe ndị magburu onwe ha dịka ogo dị nha, nrụpụta eletriki, ikuku na-ekpo ọkụ, ọnụọgụ mgbasawanye dị ala, ịmịnye onwe onye, ​​nsị ike na nkwụsi ike. Ọ nwere ọtụtụ uru dị ka modulu a kapịrị ọnụ, nguzogide ike ọgwụgwụ, nguzogide na-arị elu, nguzogide okpomọkụ dị elu, nkwụsi ike corrosion, na iyi mgbochi.
Mpaghara ngwa nke carbon fiber tube:
1. Iji ya ìhè na ike na ìhè na ike n'ibu Njirimara, ọ na ọtụtụ-eji ụgbọelu, aerospace, ewu, n'ibu akụrụngwa, agha ụlọ ọrụ, egwuregwu na oge na ndị ọzọ na bughi ihe.
2. Iji ya corrosion eguzogide, okpomọkụ na-eguzogide, ezi vetikal (0.2mm), na elu n'ibu ike, ngwaahịa adabara maka mbanye aro nke circuit iba ebi akwụkwọ akụrụngwa.
3. Jiri ike ọgwụgwụ ya na-etinye aka na agụba helikopta; jiri mgbatị vibration ya iji tinye n'ọrụ akụrụngwa.
4. N'iji ike ya dị elu, mgbochi ịka nká, mgbochi ultraviolet, na ihe ndị dị mma, ọ kwesịrị ekwesị maka ụlọikwuu, ihe owuwu ụlọ, ụgbụ anwụnta, ogwe osisi na-ebuli elu, akpa bọl, akpa, ihe ngosi ngosi mgbasa ozi, nche anwụ, akwa mmiri, akụrụngwa akụrụngwa. , akụ akụ, Klọb, gọọl omume ụgbụ, flagpole mgba ọkụ atụdo, mmiri egwuregwu na akụrụngwa, wdg
5. N'iji ogo ya na njirimara ike ya siri ike, ngwaahịa a kwesịrị ekwesị maka kites, nsị na-efe efe, ụta, ụgbọ elu eletrik, na ihe egwuregwu dị iche iche.
Post oge: Mar-29-2021